ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြင့်တင်မှု ၂၀၂၀ တွင် ပြီးစီးမည်
ဘူတာ ၃၈ ခုရှိ မြို့ပတ်ရထားလမ်းတစ်လျှောက် အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းကို တစ်နာရီလ ျှင် ၂၄ ကီလိုမီတာမှ ၄၂ ကီလိုမီတာအထိ တိုးမြင့်လာမည်
အရေးပေါ်ကာလ စီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီသစ် ဖွဲ့စည်း
ဆန္ဒပြမှု၊ ဆူပူအကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးမှု အခြေအနေများကို ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည့် အဆိုပါကော်မတီကို ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟန်နရီဗန်ထီးယူက ဦးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ မှတ်ပုံတင်ရမည့် နောက်ဆုံးရက်ကို သက်တမ်းတိုးမည်မဟုတ်ဟု ထိုင်းကြေညာ
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများသည် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးရက်အား ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးမည်မဟုတ်ကြောင်း ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်ဟု ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာက ဇူလိုင် ၁၄ ရက်နေ့က ရေးသားထားသည်။ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ တရားမဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေမှုများအား နှိမ်နင်းမှုကို မှတ်ပုံတင်ကာလ ပြီးဆုံးသည်နှင့်.
အနာဂတ် ရန်ကုန်နဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဝေပေးရေး စိန်ခေါ်ချက်
ရန်ကုန်မြို့၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေး အခြေခံ အဆောက်အအုံမှာ ဖယိုဖရဲနှင့် ယိုယွင်း ပျက်ဆီးလျှက် ရှိသည်။ စီးပွားရေးမြို့တော်ကြီးအတွက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထပ်မံလိုအပ်လျှက် ရှိသည်။ သို့သော် ပထမဆုံး လိုအပ်နေသည်မှာ လျှပ်စစ်ဝန်အားကို ခံနိုင်သော ဓါတ်အားလိုင်း သွယ်တန်းရေးစနစ်ပင် ဖြစ်သည်။ ဂျာရတ် ဒေါင်းနင်း ရေးသားသည်။ ဒီနှစ်.
ဦးဝီရသူအား အမှုဖွင့်ထားမှုကို မဟနက ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မည် မဟုတ်
ဦးဝီရသူကို တာမွေရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့အနေနှင့် တစုံတရာ ပါဝင်ပတ်သက်မည် မဟုတ်ဟု ယနေ့ပြောကြားလိုက်သည်။
စစ်ကိုင်း အလုပ်သမားသပိတ် အဖွဲ့ဝင်များ တရားခွင် နှောက်ယှက်မှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချခံရ၊ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြမည်ဟုဆို
တရားခွင်တွင် ကြွေးကြော်သံများ အော်ဟစ်ခြင်း၊ နောက်ကျောပေး ထိုင်နေခြင်းနှင့် ဆူညံမှုမပြုရန် တားမြစ်မှုကို လစ်လျူရှုခဲ့ကြ၍ဖြစ်သည်ဟု နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ် တရားသူကြီး ဦးအောင်ကျော်ဦးက ပြောသည်။
နေပြည်တော်အခြေစိုက် ပြည်တွင်းသက်တော်စောင့် လူမှုကူညီရေးအသင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းအောင်က အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားခြင်းဖြစ်ပြီး တာမွေရဲစခန်းက အမှုဖွင့်လက်ခံထားပြီးဖြစ်သည်။
ဘာသာ၊ သာသနာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာမှာ အစွန်းမရောက်ကြဖို့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က တပ်မတော်သားတွေကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မဘသကို အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိဟု မဟန ငြင်းဆို
အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (မဘသ) ဟာ သံဃအဖွဲ့အစည်း အခြေခံစည်းမျဉ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့အညီ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း မဟုတ်ဘူးလို့ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က ဇူလိုင် ၁၂ ရက်နေ့က ငြင်းဆိုလိုက်သလို မဘသကလည်း သူတို့အဖွဲ့ဟာ သံဃအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပဲ သာသနာပြု အဖွဲ့အစည်းသာဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာချက် ပြန်လည် ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။